Njikọ Aka Baghị A Ngosipụta Ngosiputa Mgbasa Ozi (KPI) maka ọtụtụ ụlọ ọrụ | Martech Zone
Njikọ Aka Abụghị Ihe Ngosipụta Ngosiputa Mgbasa Ozi (KPI) maka ọtụtụ ụlọ ọrụ
Tọzdee, Disemba 16, 2008 Tuzdee, Machị 2, 2021 Douglas Karr
Ekwetaghị m? Ego ole ka ụlọ ọrụ gị na-enweta site na nkọwa? Ego ole ka ụlọ ọrụ gị na-enweta n'aka ndị ahụ na-aza ajụjụ? Ego ole ka ụlọ ọrụ gị na-enweta site na ndị na-ekwu okwu na mgbasa ozi mgbasa ozi gị?
Ikekwe ọ dịghị.
Njikọ aka, dịka a tụrụ ya site na nkọwa ma ọ bụ ikere òkè, is enweghị isi maka imirikiti azụmaahịa. Ọtụtụ ọkachamara ga-etinye usoro ihe omimi ndị a, na-ekwu na ha ga-eduga n'ụzọ ụfọdụ, dị ka ịdọpụta oke bekee site na okpu. Ndị a bụ otu ụmụ okorobịa ndị kpọsara mkpọsa sock puppet na mgbasa ozi Super Bowl maka ụlọ ọrụ ndị azụmahịa.
Ọ dị onye gosipụtara mmekọrịta na saịtị mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ blọọgụ nke gosipụtara mmekọrịta dị n'etiti ntụgharị na nkọwa? N'ime saịtị m hụrụ, ndị dere ya bụ ndị ọ ga-abụ na ha agaghị azụta… ndị enyi, ndị ọrụ ibe, ndị na-ekwenye ekwenye, yana ndị folks na-anwa ịwulite ikike n'ịntanetị. N'ime ha niile, o doro anya na onye ọ bụla n'ime ha ga-azụ ihe.
Enweghi ike itinye aka na nzaghachi ma ọ bụ nzaghachi mgbasa ozi mmekọrịta ọ gwụla ma ịnwere ike ijikọta mmekọrịta ahụ ozugbo na ego na-esote. Nkwupụta na mkparịta ụka ekwesịghị ịbụ ezigbo ihe ịga nke ọma maka azụmaahịa belụsọ ma ịnweghị ike igosi na ha na-emetụta ọnụego mgbanwe gị.
Ewezuga: Ntugharị n'Onlinentanet
Otu uru na-apụtaghị ìhè bụ nzaghachi ziri ezi na mgbasa ozi mmekọrịta, nke nwere ike imeziwanye aha gị n'ịntanetị - ma mechaa duru ndị ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ịzụta n'aka gị dabere na aha ahụ. Ndị otito na kwe nkwa ndị dị ọcha gold… ma mgbe dị nnọọ ka ike ka m na-elekọta mmadụ media.
You chọrọ ịbụ aku na ndị ahịa gị? Ee! Ajụjụ bụ: Ndi mmadu bu na- aku n'ezie ndị ahịa? Eleghị anya ọ bụghị!
Anaghị m egosi enweghị nsọpụrụ ọ bụla ma ọ bụ wepụ anapụ ekele m nwere maka ndị gị na-esonye na blọgụ m. M hụrụ n'anya kwuru! Nkwupụta bụ ọdịnaya sitere na onye ọrụ m kwenyere na ọ na-enye aka na idebe ibe m ndụ na mkparịta ụka yana na engines ọchụchọ. Nke ahụ pụtara n'ụzọ m ga-esi nweta ego ebe ọ bụ na m nwere ike igosi mmezi albeit ziri ezi n'etiti ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ nke mgbasa ozi apịrị apị.
Agbanyeghị, ị naghị agba akwụkwọ. Running na-azụ ahịa.
Ya mere, Gịnị bụ Njikọ Aka?
Njikọ aka bụ oku ekwentị, arịrịọ ngosi, nnabata edenyere, arịrịọ maka atụmatụ… ma ọ bụ ịzụta n'ezie. Njikọ aka bụ ọrụ ọ bụla nwere ike ịdabere na ntinye ego nke ọnụnọ gị n'ịntanetị na-eweta.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị ga-atụle ịdị irè nke blog gị, ịkwesịrị ịgbakọ nke bụ eziokwu Laghachi na ntinye ego nke ahia:
ROMI = (Ntughari * Revenue) / (Ọnụ ego niile nke ndị ọrụ + Ọnụ ego niile nke Platform)
Ka anyị tufuo nke a njikọ aka hocus-pocus ma malite ikwu maka ezigbo metric nke ọma… ego ole ụlọ ọrụ gị na-enweta site na mbọ ahịa ahịa dijitalụ ya.
Nke a esichaghị ike. Otu ihe atụ bụ nkwupụta Dell kwenyere n'oge na-adịbeghị anya na ha enweela ike ịkwalite Twitter maka ihe karịrị $ 1,000,000 na ego ha nwetara!
Tụọ ihe gua! Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-etinye aka na usoro mgbasa ozi mmekọrịta, nke ahụ dị mma. Na-eme ihe n'eziokwu, na-uzo, na-emeghe a ụzọ nke nkwurịta okwu na-atụmanya gị (na-emekarị ndị na-achọ) na tụọ mmetụta nke gị ike ọrụ… ego!
Tags: blog kwurucommentsnjikọ akakpiahia kpiihe saịtị ahụ kwurunjikọ aka na weebụsaịtị
Amazing Large Format ntule Technology
Dec 19, 2008 na 6:50 PM
Ọ na-esiri ụlọ ọrụ ike ịlele njikọ aka. Ebe ọ bụ na ọtụtụ n’ime ha na-akwụ mmadụ ụgwọ ka ha mee mkpọsa mmekọrịta ha (twitter, myspace, facebook, wdg) ha nwere ike ha agaghị ama ihe ha ga-atụ. Ọ bụrụ na onye ndụmọdụ whiz bang kwuru na ọ na-arụ ọrụ, ọ ghaghị ịdị mma? Emechaa, ọ na-ekwupụta etu osiri aga, na anyị kwesịrị ịtụle itinyekwu ego na mgbasa ozi anyị.